Otu UI 2.1 melite na-abịa na Galaxy S10 ma rịba ama 10 | Gam akporosis
Otu UI 2.1 melite na-amalite ịbịa na Galaxy S10 na Rịba ama 10
Dịka e kwere na mbụ, mmelite ngwanrọ na-agbakwunye interface Otu UI 2.1 Samsung na-amalite ịgbasa na smartphones n'ofe ụwa. Usoro Galaxy S10 na Galaxy Note 10 sitere na South Korea.
Ngwaọrụ ndị na-anabata ngwungwu ngwa ngwa ọhụụ bụ Modelsdị United States na-agbachi. Mgbe ahụ, a ga-enye mmelite ahụ na mba ndị ọzọ, n'ime ụbọchị ma ọ bụ izu ole na ole.
OTA dochie One UI 2.0 na mbipute 2.1 na mobiles ndị a. Versionsdị ngwa ngwa maka Galaxy S10 na Galaxy Note 10 bụ 'G97xU1UEU3DTC9' na 'N97xU1UEU3CTC9' n'otu n'otu. Ihe ngwugwu nke mbu gbara ihe dika 1,4GB, ebe ngosiputa nke Ndenye 10 mejuputara nha faịlụ 1,6GB.
Dị ka ọnụ ụzọ GSMArena pụta ìhè, ndepụta nke atụmatụ ọhụrụ nke gosipụtara na mgbanwe mgbanwe nke nwelite ọhụụ nwere ihe ndị a: Single Take, Pro mode maka ndekọ vidiyo, Mpaghara AR na My Nzacha. Na mgbakwunye, igwefoto dị n'ihu nwere ike ịdekọ vidiyo 1080p na 2160p na okpokoro 60 kwa nkeji. Ọrụ Share na Music Share ọrụ dịkwa na listi. N'aka nke ya, dị ka a ga-asị na nke ahụ ezughị, Mmelite ahụ na-enye ọhụụ ọhụụ ọhụụ nke Google.
Mmelite ohuru a malitere igbasa n’etiti na-adịbeghị anya na nkwupụta na Samsung nyere ndị nta akụkọ banyere ya Exynos processors, nke ekpebiri nwayọ nwayọ ma e jiri ya tụnyere Qualcomm's Snapdragon 865s. Nke a na-emetụta usoro ntinye aka, nke bụ Galaxy S na Rịba ama 10. Ọtụtụ ndị bụ ndị na-eri nri nke ezinụlọ abụọ na-ahọrọ iji Qualcomm si Snapdragon chipsets, ihe na-anọchi anya na bụ akwụkwọ arịrịọ a malitere n'oge na-adịbeghị anya n'elu ikpo okwu Gbanwee.org.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » Otu UI 2.1 melite na-amalite ịbịa na Galaxy S10 na Rịba ama 10
Samsung Galaxy A21s gafere Geekbench na-egosi CPU ya
Samsung kwuru na Exynos 990 dị ike dịka Snapdragon 865